Nne Chimamanda Adichie Anwuola – Ụwandịigbo
Posted March 3, 2021 March 3, 2021 Omenka
Ka ọ gachara ihe dịka ọnwa ise o jiri kwachaa nna ya, ihe mgbu ọzọ dakwasara Chimamanda Adịchie, bụ ode akwụkwọ na-ewu ewu na mba ụwa, dịka nne ya bụ Oriakụ Grace Ifeoma Adịchie nwụkwàrà.
Ya bụ nwaanyị gbara ahọ iri asaa na asatọ ka e kwuru na ọ nwụrụ n’Ọka (Awka) bụ isi obodo steeti Anambra ụbọchị Mọnde, abalị mbụ nke ọnwa Maachi ahọ a, bụkwa ụbọchị ncheta ọmụmụ di ya bụ Ọkammụta James Nwoye Adịchie lagoro mmụọ.
Tupu ọnwụ ya, Oriakụ Grace Ifeọma Adịchie bụ onye nhàzi, bụrụ nwaanyị mbụ jiri ọkwa dịka Rejistra (Registrar) nke Mahadum Nigeria dị na Nsukka, ma sorokwa n’òtù nlekọta nke ụlọọrụ Anambra State Universal Basic Education Board, ASUBEB.
N’okwu ya banyere nke ahụ, aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obiano gosipụtara obi mwute ya banyere akụkọ ọnwụ nwaanyị ahụ, bụ nke ọ kọwara dịka ihe mgbawa obì nyegara ezinụlọ ahụ, n’ihi na o techabeghị aka ha jiri kwaa nna, bụ onye e mere mmemme akwamozu ya n’abalị iteghete nke ọnwa Ọktooba ahọ gara aga, ka ọ nwụchara n’abalị iri nke ọnwa Juunu ahọ ahụ.
Ọ kọwara nwaanyị ahụ dịka onye biri ezi ndụ, rụọ ezi ọrụ, ma jirikwa ihe o nwere, ọgụgụisi ya na ndụ ya wee jeere Chineke na ụmụ mmadụ ozi oge ọ nọ ndụ n’ụwa.
Ọ kasizịrị ezinụlọ ndị be Adịchie obi maka ọnwụ ezi nne ha ahụ, ma kpee ka Chineke nabàta ma nye mkpụrụobi ya ezumike udo n’eluigwe.
Ndị Oriakụ Grace Ifeoma Adichie hapụrụ ná-érú ụjụ ọnwụ ya gụnyere: Ijeoma Adichie, Uchenna Adichie, Chuks Adichie, Okey Adichie, Chimamanda Adichie, na Kenechukwu Adichie (ụmụ ya), tinyere ụmụ-ụmụ ya, ndị ọgọ ya na ụmụnne ha ndị ọzọ.
Ezinụlọ ahụ ga-ekwuzị ka mmemme akwmozu ya ga-esizị wee gaa n’oge kwesiri ekwesi.
Ọba Akwụkwọ Anambra Emeela Ụbọchị Ncheta Asụsụ Ọdịnala na Mba Ụwa⟶